7 सब भन्दा सस्तो स्थानहरू यूरोप मा यात्रा गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7सब भन्दा सस्तो स्थानहरू यूरोप मा यात्रा गर्न
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, यात्रा युरोप
युरोपमा केहि सुन्दर दृश्यहरू अमूल्य छन् र पुग्न सजिलो छ. तैपनि,atrip to Europe can get quite expensive if you don’t plan in advance. While most European capitals will stretch your travel budget, युरोपमा यात्रा गर्नको लागि त्यहाँ केहि ठाउँहरू छन् जुन पूर्ण रूपमा किफायती छ. हाम्रो शीर्ष7युरोपमा यात्रा गर्नको लागि सब भन्दा सस्तो ठाउँहरू पूर्ण बजेट-मैत्री छन् र प्रति व्यक्ति day €० भन्दा बढी हुनेछैन.
यी लुकेका रत्नहरू सुन्दरता र जादूमा धेरै पछाडि ढल्दैनन्, पेरिस र बर्लिन जस्तै शहरहरू.
1. युरोपमा सबै भन्दा सस्तो स्थानहरू: कोलोन, जर्मनी
जबकि जर्मनी एकदम महँगो छ, कोलोन युरोपमा भ्रमण गर्नका लागि सब भन्दा सस्तो स्थान हो. बजेट-अनुकूल आवासबाट नि: शुल्क आइकनिक स्थलहरू र सस्तो यातायात, कोलोन पक्कै पनि एक हो महान शहर ब्रेक विकल्प यदि तपाईं एकल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा परिवार युरो यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने.
यो जर्मन शहर कोल्श बियरको घर हो, त्यसोभए तपाईं केवल जर्मन € १30० डलरमा स्वाद पाउन सक्नुहुन्छ. सुन्दर रेइन नदीको किनारमा पिन्टको आनन्द लिनु भन्दा राम्रो केही छैन, शहरमा एक दिन पछि. रंगीबेरंगी घरहरूसँग पोस्टकार्ड-जस्तो स्नैपहरूको लागि फिक्स्मार्टको माध्यमबाट हिड्न निश्चित हुनुहोस् र पुरानो शहरमा जारी राख्नुहोस्, Altstadt.
साथै, जर्मनी मा सब भन्दा प्रसिद्ध स्थलचिन्ह, एक अद्भुत कोलोन क्याथेड्रल भ्रमण गर्न स्वतन्त्र छ. यसको गोथिक वास्तुकला, चित्रित गिलास विन्डोजहरू, र नदीका दृश्यहरू महाकाव्य हुन्. यदि तपाईं कला मन पराउनुहुन्छ, त्यसपछि कोलोन छ महान संग्रहालयहरु वा मनमोहक सडक कला Ehrenfeld मा. यो क्षेत्र कोलोनको हिप र ट्रेंडी अंश हो, कफी र भिन्टेज को लागी जाने ठाउँ.
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कोलोन युरोपमा यात्रा गर्नको लागि अद्भुत बजेट-अनुकूल शहर हो. सबैभन्दा माथि, यसका बारे सबै भन्दा राम्रो कुरा यो यसको कुशल र सस्तो परिवहन हो. जर्मन यातायात, रेल रेलहरु, र ट्राम अत्यन्त सहज र कुशल छन्, त्यसैले यसले तपाइँको वरिपरि यात्रा गर्न ठूलो सौदा बचाउँछ. दैनिक वा साप्ताहिक ट्रेन पास पाउनको लागि उत्तम तरिका हो यात्रा गर्दा पैसा बचत.
बर्लिनदेखि आचेन ट्रेन मूल्यहरू
फ्रान्कफर्ट कोलोन ट्रेन मूल्यहरु
कोलोन ट्रेन मूल्यमा ड्रेस्डेन
आकानदेखि कोलोन ट्रेन मूल्यहरू
2. प्रयोग, बेल्जियम
ब्रेकफास्टका लागि वाफल्स र तपाईं सबै अन्वेषण गर्न तयार हुनुहुन्छ 80 पुल र प्रेमको ताल, Minnewater. Bruges एक हो अद्भुत मध्यकालीन शहर बेल्जियममा र युरोपमा भ्रमण गर्नको लागि सब भन्दा सस्तो ठाउँहरू मध्ये एक. महलको एक उल्लेखनीय संख्याबाट एकमा नहरहरूमा डु ride्गा सवारी, ब्रुजमा गर्न सक्ने सस्तो चीजहरू छन्, ब्रसेल्सबाट रेल सवारी.
यदि तपाईं थोरै घुमाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईले निश्चित समय र आफ्नो दैनिक बजेटको एक हिस्सा चकलेटमा खर्च गर्नुपर्नेछ. 'हस्तनिर्मित' साइन इनमा हेर्नुहोस् 50 को चकलेट पसल बेल्जियम चकलेट को लागी शहर मा.
Bruges 'सानो आकार र शहर योजना को पैदल मा अन्वेषण गर्न को लागी सुपर सजिलो छ, त्यसैले तपाईंले यातायातमा समय खर्च गर्नु हुँदैन. वास्तबमा, शहर अन्वेषण र यसको संस्कृति र विरासतको बारेमा जान्नको लागि एक उत्तम तरिका एक नि: शुल्क पैदल यात्रामा सामिल हुनु हो. यस तरीकाले तपाईले किफायती रेस्टुरेन्टहरूमा सबै भित्री सल्लाहहरू पाउन सक्नुहुन्छ, स्मारिका किनमेल, र मुख्य आकर्षणहरू भ्रमण गर्न उत्तम तरिका.
एम्स्टर्डमदेखि ब्रुगेन ट्रेन मूल्यहरू
ब्रुसेल्स को ब्रुगेस ट्रेन मूल्यहरु
एन्ट्वर्प ब्रुगेस ट्रेन मूल्यहरू
Bruges ट्रेन मूल्यहरु को लागी
3. युरोपमा सबै भन्दा सस्तो स्थानहरू: चेक क्रुमलोभ, चेक गणतन्त्र
चेक गणराज्य यूरोप मा यात्रा को लागी एक सस्तो सस्तो स्थान हो, र यसैले सेस्की क्रुमलोभको सुन्दर शहर हाम्रो सूचीमा छ. यो रंगीन सहर पर्यटन-मैत्री र सबै भन्दा माथि छ, बजेट मैत्री. तपाईले आफैंलाई अन्जान गर्न र चेकको खानामा आफै सजिलै पाउनुहुनेछ, ड्राफ्ट बियर, र पर्यटन स्थलगत भ्रमण जबकि तपाईंको यात्रा बजेटबाट व्यावहारिक रूपमा केहि खर्च छैन.
सबै भन्दा पहिले, बाहिर खाना एकदम सस्तो छ, र तपाइँ उत्कृष्ट लंच मेनूहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन एक स्टार्टर प्रस्ताव गर्दछ, मुख्य मार्ग, र हास्यास्पद मूल्यको लागि बियर. बियर सबै चेक गणतन्त्रमा पानी भन्दा सस्तो छ र यसलाई प्रसिद्ध अचार ससेजहरूसँग मिलाएर, तपाईंले आफैंलाई उत्तम रात्रीको खाना खानुभयो.
यो शहर अद्भुत महल र बगैंचाहरूको घर छ जुन भेट्न स्वतन्त्र छ, र यदि तपाईं महाकाव्य दृश्यहरूको लागि आरोहण गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि टावरमा प्रवेश शुल्क भन्दा कम छ5यूरो. शहर अन्वेषण गर्न अर्को उत्तम विकल्प भनेको स्वतन्त्र पैदल यात्रामा सम्मिलित हुन र अन्य यात्रुहरूलाई भेट्ने वा पुस्तक बुक गरेर हो सेस्की क्रुमलोभ निजी शहर पैदल यात्रा गिरोह को लागी. यस तरिकाले तपाईले शहरका रहस्यहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, किंवदन्तीहरु, र परीकथा भूमिमा अद्भुत यात्रा गर्न सल्लाहहरू.
4. ईगर, हंगेरी
हंगेरी यूरोप मा एक सस्तो देश हो, र बुडापेस्ट भन्दा अधिक हेर्नको लागि त्यहाँ छ. ईगर एक रमणीय शहर हो, थर्मल स्प्रि .को साथ, बुक्क हंगेरीको राष्ट्रिय निकुञ्ज, र सुन्दर स्थलचिन्हहरू भ्रमण गर्न. यी सबै चमत्कारहरू तपाईंको यात्रा बजेटमा सम्झौता नगरी उपलब्ध छन्.
ईगर हंगेरीको प्रख्यात शहरहरू मध्ये एक हो र स्वादिष्ट रेड वाइनको घर छ, बुक्क पहाडहरूको बीचमा अवस्थित. प्राकृतिक दृश्य प्राकृतिक दृश्यहरु को लागी सही सेटिंग को लागी बनाउँछ रक्सी टेस्टिङ सुन्दर बुक्क पार्कमा एक महान पर्वतारोहण दिन पछि र प्राकृतिक स्प्रि .हरूमा आराम गरी. युरोपमा हंगेरीमा केही उत्तम प्राकृतिक स्प्रि .हरूको घर छ, थर्मल मा भिज्न एक निरपेक्ष आवश्यक छ.
एगर बुडापेस्टबाट एक आराम स्पा सप्ताहन्तको लागि उत्तम छ. छनौट एक दिन यात्रा को बीच वा बुडापेस्ट बाट शहर ब्रेक सबै तपाइँको हो, तर हामी सिफारिस गर्दछौं कम्तिमा लामो यस सप्ताहन्त शहर मा एक सप्ताहन्त खर्च गर्न.
5. युरोपमा सबै भन्दा सस्तो स्थानहरू: Cinque Terre, इटाली
उज्यालो रंगका घरहरू, राम्रो Sentiero Azzurro साथ बसेर, Cinque टेरे एक वास्तु इतालवी आश्चर्य बनाउनुहोस्. सिनके टेरे युरोप र इटालीका लागि यात्रा गर्ने सबैभन्दा सस्तो ठाउँ हो. केहि पनि आराम र छिटो बीचमा यात्रा को भावना संग तुलना छैन5दर्शनीय ठाउँहरू. यस यात्राको तरिकाले तपाइँलाई Cinque टेरे ट्रेन कार्डको साथ धेरै समय र पैसा बचाउँदछ.
आवास को रूप मा, यात्राको लागि ला स्पिजियालाई तपाईंको आधार बनाउनु एक उत्तम विकल्प हो. यो एक सुन्दर इटालियन बन्दरगाह होस्टल र होटलहरूको छनौटको साथ.
Cinque Terre धेरै मौसममा व्यस्त र महँगो हुन्छ. त्यसैले, शरद inतुमा यसको प्राकृतिक सौन्दर्यताको प्रशंसा गर्न गर्मी वा अक्टुबर-नोभेम्बरको लागि अप्रिल-जून बीच यात्रा गर्नु उत्तम हो.
La Spezia to Riomaggiore ट्रेन मूल्यहरू
फ्लोरेन्स लाई Riomaggiore ट्रेन मूल्यहरु
मोडेनाबाट रियोमाग्गीओर ट्रेन मूल्य
Livorno गर्न Riomaggiore ट्रेन मूल्यहरु
6. भियना, अस्ट्रिया
मोजार्टमा घर, बारोक वास्तुकला, Schonbrunn महल, र हरियो भूलभुलैया, भियना दिव्य छ. जबकि कोहीले यो मूल्यवान छ भन्न सक्छन्, अस्ट्रियाको राजधानीको लागि यात्रा पूर्ण रूपमा गर्न योग्य छ र प्राग वा बुडापेस्ट जस्तो अन्य यूरोपीय राजधानीहरूमा दैनिक यात्रा बजेटबाट टाढा हुने छैन।. सहर पर्यटकमैत्री छ, त्यसोभए तपाईं धनी संस्कृतिको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, भोजन, र भियनाजी जीवनको आकर्षण, तपाईंको जीवन बचतमा सम्झौता नगरी.
अस्ट्रियाको राजधानी युरोपमा भ्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा सस्तो स्थान हो, यसको पर्यटन मैत्री सम्झौता को लागी धन्यवाद. उदाहरणका लागि, भियना कार्डले तपाईंलाई संग्रहालयहरूमा ठूलो छुट दिन्छ, आकर्षण, र सार्वजनिक यातायात. साथै, तपाईं भियनाका केही अचम्मका रेस्टुरेन्टहरूमा सर्वश्रेष्ठ भियनास स्ट्राउडलको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ, खाजा खाने समयमा. धेरै रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूले एक प्रस्ताव गर्छन् 2-3 course १० मुनि को लागी पाठ्यक्रम सेट मेनू.
संस्कृति र संगीत बाहिर एक रात को लागी, धेरै क्याफेमा नि: शुल्क प्रत्यक्ष संगीत प्रदर्शन छ. तर, यदि तपाईं आफ्नो आँखाहरू एक प्रसिद्ध ओपेरा मा एक रात मा सेट छ, त्यसोभए स्थायी प्रदर्शनको लागि टिकटहरू प्राप्त गर्न तपाईंको आँखा हुनुपर्छ, किनभने तिनीहरू क्लासिक ओपेरा टिकटहरू भन्दा सस्तो छन्.
साल्जबर्गबाट ​​भियना ट्रेन मूल्यहरू
म्युनिकदेखि भियना ट्रेन मूल्यहरू
भियना ट्रेन मूल्यहरूमा ग्राज
प्राग भियना ट्रेन मूल्यहरूमा
7. युरोपमा सबै भन्दा सस्तो स्थानहरू: नोर्माण्डी, फ्रान्स
गोल्डन किनारहरू, जोन अफ आर्क अफ रुएनका किंवदन्तीहरू, मोन्ट सेन्ट द्वीप. मिशेल मठ, नर्मन्डीमा केवल केही रत्नहरू हुन्. यो मनमोहक क्षेत्र पेरिसबाट दुई घण्टाको यात्रा हो, तर फ्रान्सेली राजधानी भन्दा फरक छ, यो फ्रान्स मा यात्रा को लागी सबैभन्दा सस्तो ठाउँ हो.
नर्मान्डी प्राय: डब्ल्यूडब्ल्यूआईआई बाट अवतरण समुद्री किनारका लागि चिनिन्छ. तथापि, यो Etretat मा चट्टानहरूको घर छ, विशाल चूनढुंगा चट्टानहरूको, असाधारण प्राकृतिक आश्चर्य. दर्शनीय जिवर्नी गाउँ जहाँ क्लाउड मोनेट बस्ने र प्रख्यात लिली रंग्दथ्यो अर्को ठाउँ हो जुन तपाईलाई याद गर्नु हुँदैन। नोर्मान्डीको लागि यात्रा.
निष्कर्षमा पुग्न गर्न, युरोप मा यात्रा एक धेरै किफायती साहसिक हुन सक्छ. नोर्माण्डी, Cinque Terre, भियना, ईगर, प्रयोग, कोलोन, र सेस्की क्रुमलोभ, हो7युरोपमा यात्रा गर्न सस्तो गन्तव्यहरू. हाम्रो सुझावहरूले एकल छुट्टीमा तपाईंको जीवन-बचत खर्च गर्नबाट बचाउँदछ र तपाईं यादगार र विशेष यात्रा गर्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा यात्रा गर्नको लागि Most सब भन्दा सस्तो स्थान" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL =Https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू भेट्टाउनुहुनेछ - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ja गर्न / fr वा / डे र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप